Maxamed Dheer : Maxaa ka Guuxaya?.
W.Q. Cabdishakuur Mire Aadan(cobol)
Sida lagu yaqaan xubnaha ugu cad cad DFKM ah ayaa inta badan ka dhawaajiya inaysan jirin cid Mucaarad ku ah Dawladooda. Waxay sheeg sheegaan Argagixiso caalim ah, Haraagii Maxkamadaha.Hase yeeshe hadal ay Saxaafadu ka soo werisay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir isla markaana ah Duqa Magaaladda Muqdisho Maxamed Cumar Xabeeb ( Maxamed Dheere) ayaa noqday hadal ka duwan hadaladiisii lagu yiqiin isaga iyo Ragga ay siyaasadda jaalka ku yihiin.
Dadka sida qotada dheer u Qooraansadda Siyaasadda halka IL leh ee DFKM ayaa la yaabay hadalka Maxamed Dheere ee tibaaxayey In Dadka dagaalamayaa la hadalaan DFKM. Macnawiyan wax badan ayaa la iska weydiinkaraa hadalkan Duqa Magaaladda waxaa lagu sii adkaysan karaa maxaa iska bedelay siyaasadii hogaamiyaha Gobolka Banaadir. Dadka dagaalamaya ee uu Maxamed dheere sheegay waa kuwa DFKM ahi u taaqan Argagixiso iyo dawladiidayaal
Hadalaka Maxamed Dheere ayaa la dhihi karaa inuu biloow u yahay furfurnaasho siyaasadeed oo ay qabaan musuuliyiinta sida aadka ah u taageera DFKM ee ka soo jeeda Beelaha Hawiye. Waxaa hadalka Duqa Muqdisho loo bayaamin karaa af diblomasiyadeed oo lagula hadlay Kooxa Kacdoonka ka wada Magaaladda Muqdisho ee ku Abtirsadda Hawiyaha. waa oraah sarbeebeed lagu iftiiminayo hadalka Maxmed Dheere in la wada hadlo iyadoo la abaarayo xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira Casumadda Somaliya ee Muqdisho.
Dad badan ayaa kalsooni ku qaba hadalka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir inuu yahay biloow Talaabo wanaagsan oo loo qaadi karo dhanka isfahamka, Maxmed Dheer wada hadalada ayaa xal ugu muuqday , waxaa la oran karaa waxaa damqay isaga maalin walba dhimashada iyo dhawaca Shacabka aan waxba Galabsan oo ay galaafanayaa rabshadaha loo maarawaayey ee ay hormuudka u yihiin kooxaha diidan dawladdaa uu gacansaarka xooga ah la leeyahay. Dadweynaha waxyeeloobaya ayaa badankood la hayb ah marka la eego madaxda akhiro sabaanka soomaaliyeed ee qabyaaladu madaxmaratay waxaa la xaqiijinayaa haday qabyaaladu damqayso quluubta madaxda Hawiye in dhibaatadii dagaalada Muqdisha ka dhacday Naf iyo Maalba ay 95% galaafteen Beelaha Hawiye dad ku abtirsada. Abbe ayaa kuwaayey sadexdii wiil oo uu dhalay, hooyo ayaa saygeedii iyo caruurteedii ku weyday Dagaalka, maxaa Maal ku burburay..
Marka xalku noqday in la wada hadlo ayaa la isweydin karaa maxaa ka Guuxaya Maxmed dheere? Ma waxaa ka guuxaya in la helo Nidaam lagaga Gudbo is mari waaga Taagan. Mise waxaa ka guuxaya in xalku siduu yahay hadda weligii ahaado. Ma waxaa ka Guuxayaa inuu sameeyo nidaam Dawlad Goboleed la mid ah kan Puntland( heshiisya caalami gashay, horumar iyo amni sameyo) si uu dadkiisu u higsado horumar?.Mise inuu weligiis dadkiisu ahaado kuna jiraan is ximin qoloqol ku salaysan iyo nidaam daro?. Ma waxaa ka guuxaya Haweenka Asayda sida iyo Agoonta in la daryeelo?. Mise waxaa ka guuxaya in kuwa hor leh la arko. Ma waxaa ka Guuxaya wada hadal iyo is cafin Hawiye dhexmara? Mise waxaa ka guuxaya Nacayb iyo sifayn laga sifaynayo beelo hawiye ka mid ah Muqdisho. Ma waxaa ka guuxaya in Muqdisho la mid Noqoto Bosaaso( nabad , kala danbayn, is maqal , wada noolasho Somali oo dhan) ?Mise waxaa ka guuxaya in Muqdisho weligeed Bamdoow ku jirto.
Maxmed Ma waxaa kaa guuxaya inaad Noqoto Oday Soomaaliyeed oo Dadka isu keena .Mise waxaa kaa guuxaya inaad weligaa ahaato dhinac. Ma waxaa kaa guuxaya in Hotel Ramdaan iyo dhismayaashii dagaalka ku burburay aaad dayactirto .Mise waxaa kaa guuxaya inay weligood ku daawto burburkaas. Ma waxaa kaa guuxayaa inaan qofna fikirkiisa lagu colaadin. Mise waxaa kaa guuxaya Xabsigii Labaatan Jiroow. Ma waxaa kaa guuxaya in Sharciga loo sinaado.Mise waxaa kaa guuxay in sidii xayawaankii dadka la isdka xirxiro. Maxaa kaa guuxaya ? Maxaa kaa guuxaya? Ma hawiye in la heshiisiiyo Mise in la sii kal fogeeyo.
Maxmed Dheere Maxaa kaa guuxaya? Duqii Muqdishoow Maxaa kaa Guuxaya? Gudooiyihii Gobolka Banadirow Maxaa kaa Guuxaya? Shar iyo Khayr Maxaa kaa Guuxaya���.